Imibuzo ngesikhulu esiqashwe iTheku | Isolezwe
Imibuzo ngesikhulu esiqashwe iTheku
Isolezwe / 14 December 2012, 3:52pm /
UMNUZ Slindokuhle Hadebe oqokelwe isikhundla esiphezulu kuMasipala weTheku yize ephenywa ngecala lenkohlakalo yamathenda Ekurhuleni okuwumasipala obummisile emsebenzini
SEKUQUBUKE imibuzo ngesinqumo sikaMasipala weTheku sokuqasha umphathi omusha eMnyangweni wezokuHlaliswa kwaBantu nokuThuthukiswa kweNgqalasizinda yize egubuzelwe yifu lenkohlakalo.
UMnuz Slindokuhle Hadebe ubemisiwe emsebenzini kusukela ngoJuni ngenxa yenkohlakalo yethenda ka-R612 million okusolwa ukuthi yaphuma ngesinxele kuMasipala wase Ekurhuleni lapho ebekade eyiNhloko khona ophikweni lwezaManzi nokuThuthwa kwemfucuza.
Kuthiwa uHadebe akawudalulelanga umkhandlu lolu lwazi ngesikhathi kunenhlolokhono. Isikhundla aqashelwe sona siholela umholo ka-R1.6 million ngonyaka.
Umholi we-DA kuMasipala weTheku uMnuz Tex Collins uthe njengoba sekwaziwa ngezinsolo zenkohlakalo uHadebe abhekene nazo Ekurhuleni kungakuhle ukuthi angabe esaqokelwa kulesi sikhundla. UCollins uthe kwaba isinqumo esibi ukuthi uHadebe angabadaluleli lolu lwazi ngesikhathi bemhloma ngemibuzo kwinhlolokhono.
“Ukumiswa kwakhe emsebenzini akungabazisi ukuthi ugubuzelwe yifu elimnyama yize kungaqinisekisiwe ukuthi uyathinteka emacaleni okukhwabanisa. Ngangivele ngimanqika ngaye kwasekuqaleni,” kusho uCollins ongadalulanga imininingwane yenhlolokhono ababenayo noHadebe.
IMeya yeTheku uMnuz James Nxumalo noCollins babengabanye babantu ababehloma ngemibuzo uHadebe ngesikhathi kunenhlolokhono.
IMenenja kaMasipala uMnuz S’bu Sithole uthe akubuzwe uNxumalo ngalolu daba.
Okhulumela uMasipala uMnuz Thabo Mofokeng uthe uNxumalo wayengazi ukuthi uHadebe umisiwe emsebenzini ngoba ephenywa ngamacala okukhwabanisa. “Sizosungula olwethu uphenyo ngenhloso yokuphothula uhlelo lokuqasha,” kusho uMofokeng.
IPhephandaba iSunday Times ngo-Agasti nonyaka libike ngenkampani iLesira-Teq eyanikwa ithenda ka-R614 million eminyakeni emihlanu edlule ukuthi ifake ama-meter amanzi komasipala abangu-11 phakathi kwaseGoli naseMogale City. Kwezinye izindawo amapayipi afakwa angu-40% kwabikwa ukuthi awasebenzi.
Lo mbiko wephephandaba uveza nokuthi le nkampani yanikwa isinyenyela ithenda yeminyaka emithathu ka-R205 million nguMasipala wase Ekurhuleni.
UMnuz Hadebe wamiswa emsebenzini nezinye izikhulu ezinhlanu. UMofokeng uthe yize uHadebe kuvunyelwene ukuthi avale isikhala esavuleka ngesikhathi kungavuselelwa inkontileka kaMnuz Derick Naidoo igama lakhe elivela embikweni wenkohlakalo iManase, kunemigudu okumele ilandelwe ngaphambi kokuthi uHadebe aqale umsebenzi wakhe.
“Kungalesi sikhathi-ke lapho sizoqala khona uphenyo lwethu lwangaphakathi ngodaba lukaHadebe,” kusho uMofokeng.
Okhulumela uMasipala wase Ekurhuleni uMnuz Simon Modiba uthe ngoJulayi bamisa emsebenzini izikhulu ezinhlanu ngenxa yokuphulwa komthetho onikezela ngamathenda omsebenzi.
“UMasipala wabamisa emsebenzini khona kuzoqhutshekwa nophenyo yingakho kwabizwa nabe-Special Investigating Unit ukuze kusheshwe. Bebehola umholo ogcwele yize bemisiwe emsebenzini,” kusho uModiba othe bebengazi ngesicelo somsebenzi esifakwe uHadebe kuMasipala waseThekwini.